Kuti ikurumidze kuderedzwa kwechimiro uye kudengenyeka kwemuviri kuti uvandudze kutsvedzerera (kunyaradza) kwemota, mashura anopinza anoiswa mukati meiyo suspension system mumotokari zhinji.
Iyo yekuvhunduka-absorbing system yemotokari inoumbwa nezvitubu uye zvinokatyamadza. Shock absorbers haashandiswe kutsigira huremu hwemuviri, asi anoshandiswa kudzvanya kuvhunduka kwechirimo mushure mekubatwa nekuvhunduka uye kutora simba rekukanganisa mugwagwa. Zvitubu zvinotora basa mukugadzirisa kuvhunduka, kushandura "simba guru rekuvhundutsa" kuita "diki simba rakawanda maitiro", ukuwo zvinodhonza zvishoma nezvishoma zvinoderedza "diki simba rakawanda kuvhunduka". Kana iwe uchityaira mota ine shock absorber yakaputsika, unogona kuona mota ichibhowekana nepaburi rega rega uye nemhedzisiro yeups and downs, iyo inoshandiswa kudzvanyirira bounce iyi. Pasina iyo yekukatyamadza, kudzoreredzwa kwechitubu hakuzodzoreki, mota inoburitsa yakakomba bounce kana ikasangana nehutsinye hwemigwagwa, uye kurasikirwa kwekubata kwetai uye traceability nekuda kwekuvhunduka kwechitubu kumusoro nekudzika pasi.
Kubva pakona yekugadzira zvinhu zvinonyorovesa, zvinokatyamadza zvinonyanya kuve hydraulic uye inflatable, kune inoshanduka inonyorovesa damper.
Hydraulic shock absorbers anoshandiswa zvakanyanya mumotokari kumisa masisitimu. Nheyo yacho ndeyokuti kana furemu neakisi zvichifamba zvichienda mberi nemberi uye piston inofamba ichienda mberi nekudzoka muhumburumbira yechubhu yeshock absorber, mvura iri mushock absorber housing inoyerera yadzokororwa nepakati pemamwe maburi akamanikana kupinda mukati megomba remukati. Panguva iyi, kukweshana kuri pakati pemvura nemadziro emukati uye kukweshana kwemukati memokurumu yemvura kunoumba simba rekunyorovesa pakudengenyeka.
Inflatable (kuzadza gasi)
Inflatable shock absorbers rudzi rutsva rwekuvhunduka-absorbers yakagadzirwa kubvira kuma1960. Chimiro chacho chinoratidzwa nepiston inoyangarara muchikamu chezasi checylinder barrel, iyo izere ne-high-pressure nitrogen mukamuri inosunga mhepo inoumbwa kune imwe mugumo wepiston inoyangarara uye cylinder An O-chisimbiso chine chikamu chikuru. yakaiswa papiston inoyangarara, iyo inoparadzanisa zvachose mafuta kubva gasi. Iyo piston inoshanda inosungirirwa nekumanikidza uye mavharuvhu ekuwedzera anoshandura chiteshi chepakati-chikamu nzvimbo zvichienderana nekumhanya kwekufamba. Kana mavhiri achikwira achikwira nekudzika, mapistoni anoshanda echikatyamadzo anoita mafambiro anodzokedzana mumvura, zvichikonzera mutsauko mukutsikirira kwemafuta pakati pepamusoro nepasi maburi emapiston anoshanda, uye mafuta ekumanikidza anosundira vharafu yekumanikidza uye vharafu yekuwedzera kumashure. uye mberi. Nekuti vharafu inoburitsa simba rakakura rekunyorovesa pamafuta ekudzvanywa, iyo vibration inoora.
Chimiro cheshock absorber itsvimbo yepiston inoiswa muchubhu ine pistons, iyo izere nemafuta. Iyo piston ine throttle maburi anobvumira mafuta ari muzvikamu zviviri zvenzvimbo zvakapatsanurwa nepiston kuti zvibatsirane. Damping inogadzirwa kana mafuta e-viscous achipfuura nepakati pegomba, iyo idiki iyo gomba, iyo yakakura simba rekunyorovesa, iyo yakakura viscosity yemafuta, iyo yakakura simba rekunyorovesa. Kana iyo throttle saizi isingashanduke, kana iyo yekuvhundutsa ichishanda nekukurumidza, inonyorovesa pamusoro-the-assembly mhedzisiro pakubata kwekuvhunduka. Naizvozvo, dhisiki-yakaita rutsanga valve yakaiswa panzvimbo yekubuda kwegomba re throttle, uye kana kumanikidza kunowedzera, vharafu inovhurwa kumusoro, iyo throttle hole yekuvhura yakakura uye kunyorova kunoderera. Nekuti piston iri munzira mbiri inofamba, mavharuvhu etsanga akaiswa pamativi ese episton, anonzi compression mavharuvhu uye ekuwedzera mavharuvhu, zvichiteerana.
Maererano nechimiro chayo, damper yakakamurwa kuva imwe uye kaviri mbiya. Inogona zvakare kukamurwa kuita: 1. . Mono tube air pressure damper; Kaviri-tube mafuta pressure damper; Twin chubhu mafuta uye gasi shock absorber
Inoreva kuvhunduka kunobata masimbi maviri mukati nekunze, piston iri mukati mehumburumbira kufamba, nekuda kwepiston tsvimbo ichipinda nekunze, huwandu hwemafuta muhumburumbira hwemukati hunowedzera uye hunoderera, saka kuburikidza nekuchinjana nekunze chubhu kusvika. chengetedza kuenzana kwemafuta muhari yemukati. Nokudaro, panofanira kunge kune mavharuvhu mana mu twin tube damper, ndiko kuti, kuwedzera kune maviri throttle valves papiston yakataurwa pamusoro apa, panewo vheji yekutenderera uye valve yekubhadhara yakaiswa pakati pemukati uye kunze kwevhavha kuti ipedze kuchinjana.
Kuenzaniswa nemhando yebinocular, iyo mono tube damper iri nyore mukugadzirisa uye inoderedza nhamba yevhavha masisitimu. Yakaiswa piston inoyangarara muchikamu chezasi chehumburu (inonzi inoyangarara inoreva kuti hapana piston tsvimbo yekudzora kufamba kwayo) uye inoumba kamuri yemhepo pasi pepiston inoyangarara yakazadzwa ne-high-pressure nitrogen. Shanduko yechiyero chemvura chinokonzerwa nepiston tsvimbo inopinda nekubuda mumvura yataurwa pamusoro inogadziridzwa otomatiki nekuyangarara piston inoyangarara. Pamusoro pezviviri zvekuvhundutsa zvinotsanangurwa pamusoro apa, kune kuramba kunogadziriswa damper. Inoshandura ukuru hwegomba re throttle kuburikidza nekushanda kwekunze. Iyo ichangoburwa mota yakashandisa yemagetsi controlled shock absorber seyakajairwa chishandiso kuona mamiriro ekutyaira kuburikidza nemasensa, uye komputa yakaverengera iyo optimum damping simba, ichibvumira iyo damping mechanism pane yekuvhunduka absorber kuti ishande yega.
Iyo yekuvhundutsa inopinza yakagadzirwa naMax Auto, inosanganisira mhando yemafuta uye gasi rudzi, twintube uye mono chubhu, yakatengeswa zvakanyanya pasirese pasirese, inosanganisira USA, EUROPE, Africa, Mid-East, South Asia neSouth America.
Makore achangopfuura Max akagadzira nhevedzano yeakagadziridzwa yekuvhundutsa, inonyorovesa inogadziriswa, ine monotube, inonziwo coilover isu tinodada nekuwana yakanaka rating pasirese, takagadzira OEM yeimwe yakakurumbira mhando.
Nguva yekutumira: Sep-26-2021